Fametrahana sy fikirakirana manokana an'ny Antergos GNOME [ISO Aprily 2015] | Avy amin'ny Linux
Nanandrana distros maro aho hatramin'ny nidirako tamin'ny tontolon'ny GNU / Linux, ary nanontany tena foana aho raha misy famotsorana vita tsara.
Ny tsara indrindra nataoko dia, tsy isalasalana, KaOS. Tsy lavorary izy io, fa io no zavatra akaiky indrindra amin'ny fahalavorariana. Ny olana dia mifantoka amin'ny 64 bits sy KDE fotsiny i KaOS. Misy famotsorana mendrika ho an'ny GNOME ve? Andro vitsy lasa izay dia hitako ny valiny: Eny, Antergos.
Rehefa nanapa-kevitra ny hiala tamin'ny Fedora aho dia napetrako mba hitsapana azy, ary ankoatry ny olana manokana manokana ao amin'ny PC-ko dia nahagaga ny valiny. Eto aho dia manolotra ny rehetra ny fametrahana sy ny fametrahana Antergos araka ny itiavako azy. Ankafizo;).
2 Fametrahana Antergos sy rindrambaiko rehetra
4 Amboary ireo kisary Numix tsy miseho
6 Faran'ny torolàlana
Antergos dia fizarana GNU / Linux mifototra amin'ny Arch. Midika izany fa famotsorana an-tsokosoko, ny rindrambaiko rehetra dia havaozina ary manana ny iray amin'ireo tahirim-bola lehibe indrindra, miaraka amin'ny mpitantana fonosana haingana indrindra: Pacman.
Ho fanampin'ny "mpandova" ny endri-javatra Arch, Antergos manana installerany manokana (Cnchi), ahafahanao mametraka azy mora foana sy misafidy ny tontolon'ny birao tianao (tsy mihoatra ny ISO isaky ny tontolo iainana!).
Momba ny famolavolana, Antergos dia mitondra amin'ny alàlan'ny default Numix kisary sy lohahevitra (Raha tsy tianao dia azonao ovaina izany), na dia hanaiky aza aho fa toa hafahafa tamiko izany, dia toa lavorary: Tsotra sy kanto. Raha ny momba ny GNOME dia misy ihany koa ny fanitarana efa napetraka mialoha.
Amin'ity toro-lalana ity dia hianaranao ny fomba fametrahana Antergos amin'ny GNOME tena tiako ny azy. Tsy hanomboka hampisaraka ny baiko aho, hanazava azy tsirairay, sns sns. Hotsoriko ilay hevitra. Ny rafitra vokariny dia hanana ny rindrambaiko rehetra heveriko fa mety indrindra, avo lenta kokoa, ka raha tsy miombon-kevitra amiko ianao dia azonao ovaina foana ilay ampiasainao rehefa vitanao ny torolàlana.
Ny valiny farany dia izao:
Miaraka amin'ity toro-lalana ity ny sary masina rehetra dia ho Numix. Ny olon-drehetra. Izaho dia nitandrina mba hanitsiana ireo izay tsy mavesatra entana ary manana namana namolavola ilay iray ho an'ny PPSSPP, izay tsy hita.
Inona no rindranasa hanananao raha mampihatra an'ity torolàlana ity ianao?
Tontolon'ny Desktop: GNOME
Mpivezivezy amin'ny Internet: Firefox (+ AdobeFlash)
Mpanonta lahatsoratra (ho an'ny fandaharana): Atom
CD / DVD recorder: Brasero
Mpitantana fizarazarana: GParted
Office mandeha ho azy: LibreOffice
Fanovana sary: GIMP
Sary (tsotra): Pinta
Sary (mandroso): tsaoka
Volavola famolavolana: Inkscape
Sary RAW: RawTherapee
Mpilalao mozika: Rhythmbox
Tonian-dahatsoratra audio: EasyTAG
Fanovana feo: Audacity, Ardor
Mpilalao horonantsary: MPV
Fanontana horonan-tsary: Pitivi
Endrika 3D: blender
Sarimiaina: Studio studio
Mpanjifa torrent: Transmission
Chat (lahatsoratra): Telegram (mila telefaona finday)
Chat (feo): Skype
Emulator: PCSXR (PSX), PCSX2 (PS2), VBA-M (GBA), Dolphin (GC sy Wii), DeSmuME (NDS), PPSSPP (PSP)
Masinina virtoaly: VirtualBox
Cool? Ka andao ary!
Fametrahana Antergos sy rindrambaiko rehetra
Ny fametrahana dia tsy misy mistery; Hiteny izany aho Antergos no manana ny installer tsara indrindra amin'ny disto rehetra. Raha efa nametraka Ubuntu, Fedora ianao na mora apetraka hafa, dia ho mofo mofomamy i Antergos. Aza adino ny misafidy GNOME (izay no itiavany ity torolàlana ity). Rehefa manontany anao aho hoe inona ny rindrambaiko fanampiny tadiavinao dia avelao toy izao:
Avy eo kitiho ny fanaingoana ireo fizarana (izay manome anao ny safidy hanao azy ireo ho azy na amin'ny tanana), avy eo ny data-n'ny mpampiasa anao ary amin'ny farany ny fametrahana. Rehefa vita izany dia hangataka anao hamerina izy ary ho ao amin'ny Antergos vao napetraka ianao.
Aorian'ny fidirana voalohany (ho hitanao fa tsy GDM izy io, fa LightDM misy ny endriny) hiseho ny varavarankely manontany anao raha tianao havaozy amin'ny Espaniôla ny anaran'ny lahatahiry. Zahao "Aza manontany ahy ity intsony" ary havaozy ireo anarana:
avy eo manavao izahay mampiasa ny programa "Fanavaozana ny lozisialy". Aleo ianao manao azy foana miaraka amin'io programa io, satria manavao ireo fonosana AUR apetrakay ihany koa. Na izany na tsy izany, Antergos dia mitondra rafitra fampandrenesana izay hampandre anao isaky ny mila manavao ianao. Vantany vao vita aho, restarts ary manokatra terminal. Alefaso ity manaraka ity:
Hisokatra ny fisie Pacman config. Ny tanjontsika dia ampidino ny tahiry Multilib (raha mampiasa 32 ianao AZA manao an'io), izay hataonay amin'ny famafana ny "#" izay miseho eo am-piandohan'ireto andalana roa ireto:
[multilib] Ampidiro = /etc/pacman.d/mirrorlist
Mitahiry, manidy ary manavao ireo trano fitahirizana izahay:
Andao hiaraka amin'ny mpamily karatra sary. Raha tsy mampiasa NVIDIA ianao dia tsy mila manao na inona na inona mihitsy, satria ireo mpamily maimaimpoana (misokatra) dia apetraka amin'ny toerana misy anao, izay miasa tsara amin'ny ankamaroan'ny sary. Amin'ny hetsika ampiasainao NVIDIA ary te hampiasa ny mpamily tompony (mihidy), mila mampiasa baiko iray ianao na iray hafa arakaraka ny maodely anananao.
Ny fonosana manomboka amin'ny "lib32-" dia 64-bit ihany
Raha mampiasa NVIDIA maoderina ianao:
Raha mampiasa NVIDIA taloha ianao (zahao eto, amin'ny vokatra tohanan'ny):
Amin'ireo tranga roa ireo dia hanontany anao izy raha manolo fonosana roa mifandona. Lazao amin'ny olona rehetra eny. Raha mbola antitra noho ireo mila mpamily 340 ny sary nataonao dia azo inoana fa miasa tsara ho anao i Nouveau (mpamily afaka). Farany, amin'ny tranga misy NVIDIA misy mpamily fananana dia tsy maintsy reboot.
Miala tsiny raha milaza fa tsy manana na inona na inona ho an'ny mpampiasa NVIDA Optimus aho. Ao amin'ny solosainan'ny namana misy io haitao io ny LiveCD dia tsy navesatra akory, noho izany tsy azoko natao ny nanandramana ny fomba fiasan'i Bumblebee :(.
Esorinay ny rindrambaiko izay tsy hampiasainay na manana fomba hafa azo soloina:
sudo pacman -R pidgin cmake empathy totn gnome-disk-utility gnome-documents gnome-photos gnome-music bijiben
Mametraka ny rindrambaiko rehetra izahay amin'ny baiko tokana (tadidio fa raha mampiasa 32 bits ireo fonosana izay manomboka amin'ny "lib32-" ianao dia tsy mila mametraka azy ireo):
sudo pacman -S git mercurial lsdvd libdvbpsi libdvdread libdvdnav gnome-calendar gnome-clocks mpv gimp inkscape mypaint pinta calligra-krita rawtherapee blender synfigstudio simple-scan minetest 0ad supertuxkart audacity ardor pitivi plugins plugins-plugins plugins plugins plugins plugins easytag filezilla flashplugin lib0-flashplugin gnome-font-viewer gparted virtualbox virtualbox-host-modules virtualbox-host-dkms linux-headers vbam-gtk desmume dolphin-emu pcsxr pcsx18 ppsspp mupen32plus lib2-libcanberra-libseap libseap plugins dconf-editor skype fivoarana gnome-contact
Aza adino ny mamaly eny amin'ireo fanontaniana momba ireo fonosana mifanipaka.
Mba hahazoana antoka fa hiasa ho antsika VirtualBox:
sudo systemctl mamela dkms.service
sudo dkms mametraka auto
Manokatra ny programa "Add / Delete software" izahay ary mametraka ireo fonosana "preload", "atom-editor" ary "telegram-bin" avy eo. Rehefa anontaniana ianao raha te-hanova ireo rakitra fikirakirana sasany dia valio ny tsia. Amin'ny tranga sasany dia ho ampy ny manoratra ilay taratasy s o n, raha any amin'ny hafa kosa tsy maintsy manery ianao Intro. Rehefa vita dia akatonay.
Raha te hampandeha ny Preload:
sudo systemctl mamela preload.service
Raha manao programa ianao Haskell ary mampiasa ianao PostgreSQL toa ahy koa, tantano koa ity:
sudo pacman -S postgresql ghc cabal-install haddock faly Alex
Farany, mametraka izahay fanitarana ity mba hampisehoana ireo kisary lovia eo amin'ny bara ambony. Mamerina indray izahay.
Handeha haingana, apetrako amin'ny fomba skemativa ny zava-drehetra.
Mikaroha> Nofoaninay ny zavatra tsy tianay karohina (raha ny amiko: ny zavatra rehetra)
Famatsiam-bola> Apetrakay ny vola izay tianay (manoro aho izany)
Filazana> Ny an'ny Rhythmbox ihany no esorinay
Faritra sy fiteny> Ataovy amin'ny Espaniôla ny zava-drehetra
Feo> Vokatry ny feo> Akory ny "Feo"
Fanoratana> Compose key: Right Ctrl (tena ilaina amin'ny endri-tsoratra tsy mahazatra)
Fangaro mitambatra> Ampio:
Anarana: Open terminal
Amboarinay amin'ny izy Ctrl + Alt + T (Amin'ity fomba ity dia hanokatra tsara ny terminal izahay, toy ny amin'ny Ubuntu)
Daty sy ora> Akory ny «Daty mandeha ho azy ary izao» ary «Faritra ora mandeha ho azy»
Fisehoana> Alefaso ny "Global Dark Theme"
Bara avo indrindra> Avelao ny "Asehoy ny daty"
Kitendry sy totozy> Atsaharo ny “Mametaka eo amin'ny tsindry afovoany”
Extensions> Izahay fotsiny no avela
Efijery hidin-jiro Lightdm
Lohahevitry ny mpampiasa
Famantarana ny sehatr'asa
Kitendry sy totozy> Atsaharo ny «Mametaka eo amin'ny tsindry afovoany»
Fijery> Ampandehano ny "Mametraha lahatahiry alohan'ny fisie"
Fihetsika> Ataovy mavitrika ny "manontany isaky"
Ankapobeny> Atsaharo ny "Asehoy ny bara fisehon'ny zotram-pifandraisana amin'ny alàlan'ny default"
Ampandehano ny "Asehoy ny laharana andalana"
Akaro ny "Asehoy ny sisiny ankavanana ao amin'ny tsanganana: 80"
Ampandehano ny "Asongadino ny tsipika ankehitriny"
Ampandehano ny "Asongadino roa ny fononteny"
Akaro ny "Ampidiro ny toerana fa tsy kiheba"
Alefaso ny "Enable indentation mandeha ho azy"
Endri-tsoratra sy loko> Safidio ny "Solar dark" (Solarized dark)
Fitaovana> Araka ny tianao indrindra
Plugins> Avelao eo ihany: Fikarohana rakipeo, Brillo Media Grillo, MediaServer2 D-Bus Interface, MPRIS D-Bus Interface, ary sary an-tsary
General> Ampandehano ny "Genres, artist and albums"
Mozika> Ampandehano ny "Zahao ny tranombokiko ho an'ny rakitra vaovao"
Desktop> Ampandehano ny "Sakano ny hibernation rehefa mandeha ny rano"
Amboary ny "Hamarino foana raha toa ka Firefox ny browser-nao default"
Homepage: https://duckduckgo.com (ao amin'ny safidy DuckDuckGo, ovay ny mainty ho an'ny faritra)
Fikarohana> Apetrakay ny DuckDuckGo ary esorina ny sisa amin'ireo safidy
Tsiambaratelo> Ampandehano ny «Lazao ireo tranonkala izay tsy tiako arahana»
Add-on apetraka: Flaghio, Adblock Edge ary HTitle (esory ny «Legacy Mode» amin'ny safidinao)
Ampandehano ny lohahevitra: Numix Dark GTK
Manelingelina anao ve izany fa isaky ny manindry ny bokotra afovoan'ny totozy ianao eo ivelan'ny rohy dia mandefa anao amin'ny pejy teo aloha? Kitiho avy eo ny: config ao amin'ny bara adiresy, tadiavo ny "Middlemouse.contentLoadURL" ary apetaho amin'ny "diso".
Izahay dia manatanteraka ireto manaraka ireto mba hisokatra telegrama ary mamorona ny mpandefa anao:
Manamboatra azy izahay:
Atsaharo ny "Asehoy mialoha ny hafatra"
Atsaharo ny "Change emojis"
Fitaovana fanamafisam-peo> Atsaharo ny "Avelao i Skype hanitsy ny haavon'ny fifangaroako"
Mametraka fonosana tena ilaina amin'ny Atom izahay:
apm mametraka minimap color-picker save-session misongadina-voafantina tetikasa-manager task seti-ui seti-syntax
Hijery> Toggle Menu Bar (rehefa te haneho ianao dia tsindrio Alt)
Ampandehano ny "Scroll Past End"
Ampandehano ny "Soft Wrap"
Manidy ny Atom izahay.
Raha te handahatra amin'ny HTML5 ianao:
apm mametraka linter linter-htmlhint linter-csslint linter-jshint atom-html-preview autoclose-html
Raha te handahatra amin'ny Haskell ianao:
apm mametraka fiteny-haskell autocomplete-plus ide-haskell fiteny-shakespeare
fanavaozana ny cabal
hametraka cabal-haskell ghc-mod
Raha te hiasa ilay fonosana "ide-haskell" tsy manam-paharoa dia mila mihazakazaka manaraka ianao:
Ary ampio ity amin'ny faran'ny rakitra (ovao ny "lajto" amin'ny anaranao):
Raha manao programa amin'ny PL / pgSQL ianao:
apm mametraka fiteny-pgsql
Amboary ireo kisary Numix tsy miseho
Toa tsy milamina tsara ny mpandefa sasany hampiasana ireo sary masina Numix. Aza manahy fa hanitsy azy ireo izahay!
Atombohy amin'ny telegrama. Manokatra ny fampirimana manokana izahay ary manery Ctrl + H. Mandeha amin'ny .local / share / applications / izahay ary mamafa ny mpandefa Telegram. Manidy ny mpikaroka rakitra izahay ary manatanteraka:
Adikainay ato anatiny ny lahatsoratra manaraka:
#! / usr / bin / env xdg-open [Entry Desktop] Encoding = UTF-8 anarana = Telegram anarana [hr] = Telegram Exec = / opt / telegram / Telegram Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / azo refesina / apps / telegram.svg Terminal = diso Karazana = Sokajy fampiharana = Fampiharana; StartupNotify = diso
Mora kokoa ireto manaraka ireto.
Para mafana fo izahay dia manao "sudo gedit /usr/share/applications/ardour.desktop" ary manova ny Icon ka "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / ardour.svg".
Para HPLip manatanteraka ny "sudo gedit /usr/share/applications/hplip.desktop" izahay ary manova ny Icon mba "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / hplip.svg".
Raha mampiasa ianao Nikatona ny NVIDIA, manatanteraka "sudo gedit /usr/share/applications/nvidia-settings.desktop" izahay ary manova ny Icon ka "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / nvidia.svg"
Manova ny Icon an'ireo mpandefa telo izahay Avahi hametraka azy io ho "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / network-workgroup.svg":
Farany manana ny kisary an'ny PPSSPP... Mampalahelo fa tsy i Numix no namolavola azy, fa aza matahotra! Nangataka namako iray aho hamolavola azy ary hampakatra izany ao amin'ny trano fitahirizana GitHub. Mba hanampiana ny kisary amin'ny fonosanao Antergos dia alao fotsiny ireto baiko manaraka ireto:
cd / usr / fizarana / sary / Numix-Square / azo ovaina / apps /
Manova ny Icon izahay mba "Icon = / usr / share / icons / Numix-Square / scalable / apps / ppsspp-numix-icon-by-kaero.svg". Vonona!
Milalao WoW ve ianao? Avy eo, efa roa izahay! Mampihoron-koditra ny mila mampiasa baoty roa miaraka amin'ny Windows irery ihany mba hilalaovana, koa eto aho no hanazava ny fomba fampiasana ny divay hahafahana milalao azy amin'ny fomba azo antoka indrindra.
Hanombohana, mankanesa any amin'ny fampirimana lalao, mankanesa any WTF / Config.wtf ary ampio ity manaraka ity amin'ny faran'ny fisie:
ATSIMO gxAPI "OpenGL"
Avy eo afindrao ny fampirimana WoW mankany amin'ny fampirimanao manokana ary omeo anarana hoe ".wow-folder" raha tsy misy teny nalaina. Avy eo dia mametraka divay izahay (fonosana manomboka amin'ny "lib32-" dia an'ny 64 ihany):
sudo pacman -S divay winetricks divay_gecko divay-mono lib32-mpg123 lib32-libldap lib32-libtxc_dxtn lib32-libpulse lib32-openal lib32-alsa-lib lib32-alsa-plugins lib32-libxml2 lib32-giflib lib32-libpng lib32-gnutls
Manamboatra ny divay izahay hiasa 32 bitika (hisokatra ny varavarankely, akatonay fotsiny izy dia izay ihany):
Ankehitriny dia hamorona rakitra SH izay mitantana ny lalao amin'ny fomba azo araraotina faran'izay betsaka indrindra izahay (ovao ny solonanarana "lajto"
Raha tsy mampiasa NVIDIA mihidy ianao:
echo "WINEDEBUG = -dray alika / trano / trano /.wow-wotlk/wow.exe -opengl $> / dev / null" >> ~ / .wow-wotlk / wow.sh
Etsy ankilany, raha mampiasa NVIDIA mihidy ianao dia azonay dinihina tsara kokoa:
echo "WINEDEBUG = -all __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS = divay / tranokala / trano /.wow-wotlk/wow.exe -opengl $> / dev / null" >> ~ / .wow-wotlk / wow.sh
Raha ny amiko, izay mampiasa NVIDIA mihidy, dia gaga aho fa nanatsara azy io. Ao amin'ny Windows 7 ny lalao dia 45 FPS miaraka amin'ny kalitao amin'ny ambany-ambany. Etsy ankilany, ao Antergos miaraka amin'ny fanatsarana izay vao nasehoko dia mandeha amin'ny 60 FPS miaraka amin'ny kalitao farafaharatsiny. Mahatalanjona.
Ary farany, izahay dia mamorona ny mpandefa (hanova "lajto" ho an'ny solonanaranao):
#! / usr / bin / env xdg-open [Entry Desktop] Encoding = UTF-8 anarana = World of Warcraft anarana [hr] = World of Warcraft Exec = sh /home/lajto/.wow-wotlk/wow.sh Icon = / usr / fizarana / kisary / Numix-Square / azo ovaina / apps / WoW.svg Terminal = diso Karazana = Sokajy fampiharana = Fampiharana; Lalao; StartupNotify = diso
Vonona ao Antergos ny World of Warcraft anao!
Miarahaba, manantena aho fa nahasoa izany; D.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fametrahana sy fikirakirana manokana an'ny Antergos GNOME [ISO Aprily 2015]
Lahatsoratra tena tsara! Izaho koa dia freaky WoW, fa amin'ny linux tsy azoko mihitsy ny miasa :(.
Hiezaka ity fomba ity aho, antenaina fa mandeha….
Ho an'ny Lol (League of legends) azonao atao ve ny fampisehoana toy ny Windows?
Tsy milalao ligy aho, ka tsy afaka manampy anao any :(. Arahaba.
Wtf? Sa tsy i Fedora no tsara indrindra?
Tsy misy ny antsoina hoe "ny tsara indrindra." Raha ny amiko, dia toa ny safidy tsara indrindra ny mamolavola tetikasa iray ao amin'ny Haskell sy PostgreSQL, satria mila rindrambaiko maoderina hiasa aho ary tiako ny mitondra ny filozofia amin'ny fampiasana ny rafitra miasa mitovy amin'ny PC sy amin'ny mpizara.
Ny tena izy dia amin'ny farany, aorian'ny fandalinana betsaka, amin'ny mpizara dia hampiasa DragonFlyBSD aho, izay hahafahako mampitombo be ny fahombiazan'ny PostgreSQL. Raha jerena izany zava-misy izany dia tsy ilaina ny hampiasako ny OS mitovy amin'ny PC amin'ny servera, satria ny DragonFlyBSD dia tsy miasa amin'ny karatra sary. Amin'izay dia hisokatra ny varavarana (mety hijanona ao amin'ny Debian 8 aho). Antegos dia nanandrana azy fotsiny aho teny am-pandehanana.
Fantatro fa maro aminareo no tsy mahatakatra ny fiovan'ny fizarana tsy tapaka, saingy toa mahafinaritra ahy ny ahafahan'ny mpampiasa GNU / Linux miova be. Tsy mamela antsika hanandrana teknolojia vaovao sy hafa fotsiny izy io, fa mamela antsika hanova distro lehibe koa rehefa "tsy mendrika" ny safidintsika taloha. Noho izany dia apetraka ireo bateria ireo tetik'asa;).
Fantatro fa tsy misy tsara indrindra, fa andro vitsivitsy lasa izay dia napetrakao ho zavatra tsara indrindra nitranga taminao ...
Debian na CentOS / RHEL no tsara indrindra ho an'ny mpizara, fantatrao fa tsy hanana olana ianao.
Io no tsara indrindra ao: 3. Iray amin'ireo tiako indrindra io.
Fanontaniana tsotra; Antegos dia manome ny fahafahan'ny multiboot.?
Raha amin'ny multiboot no tianao holazaina dia ny mampiditra rafitra miasa mihoatra ny iray avy amin'ny GRUB, heveriko ho toy izany, toy ny amin'ny distrikan'ny ô.o rehetra.
Elche dia hoy izy:
Lahatsoratra tsy misy dikany, miarahaba anao aho. Mampiasa Antergos Gnome aho ary toa ny safidy tsara indrindra amiko amin'ny derivatives of Arch, tena tsara izany, tonga lafatra ny estetika sy ny fampidirana ireo fampiharana. Salama.
Mamaly an'i ElChe
Misaotra betsaka! Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, avy amin'ny derivatives of Arch, Antergos no tena mahomby indrindra: P.
Victor LLore dia hoy izy:
Fidirana tsara, tiako i Antergos, ny olako dia tsy afaka nametraka etona, ary nanova ireo mpamily nvidia ho fananana (ity farany voavaha misaotra anao). Ny tsy manana ny installer dia ny safidy hisafidianana mpamily sy fitaovana toa ny Manjaro Settings Manager, hametrahana mora foana ny kernel izay hahasoa antsika indrindra. Miarahaba sy misaotra.
Valiny tamin'i Victor LLore
Faly aho fa nahasoa anao io! Soa ihany, Antergos / Arch no nanamboatra ny famolavolana ireo mpamily mihidy NVIDIA, noho izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fametrahana fonosana vitsivitsy fotsiny: P.
Donnie dia hoy izy:
Ahoana no hanovako ny sisin'ny akaiky, hampihenana ary hampitomboiko ny bokotra fisehon'ny windows?
Valiny tamin'i Donnie
Raha tianao ny hametraka azy ireo amin'ny ankavia, mino aho fa azo atao izany. Ny endrik'i GNOME dia mpandala ny nentin-drazana amin'io lafiny io, satria mampifangaro ny fampifandraisan'ireo programa amin'ireo bokotra lazainao izy io, ka tsy afaka manova toerana. Ataoko fa tsy misy safidy hafa afa-tsy ny mitazona x).
Mpiara-miasa tsara, pucha ... Maniry aho fa hisy KaOS multilib misy 32bit, betsaka ny rindranasa tsy mandeha satria 64bit ihany, Steam ohatra ary ho an'ny gamer toa ahy, tsy misy Steam, tsy misy fiainana.
jujes dia hoy izy:
Salama! tonga tato an-tsaiko ilay fampianarana. Mila mahafantatra ny fomba fametrahana goto fotsiny aho: github.com/ankitvad/goto olona afaka manampy ahy? tsy misy zavatra mitranga aorian'ny "manaova fametrahana"
Mamaly an'i jujes
Hitako eto ny valin'ny fanontaniako:
Ny vahaolana dia izao:
Torolàlana tena tsara ho an'ireo izay te-hanomboka ao Antergos Gnome. Ny olana lehibe indrindra hitako, raha ny fahitako azy, mazava ho azy dia ny fanitarana. Zava-dehibe izy ireo ny mamela ny distro araka ny itiavanao azy, fa mila mianatra teny anglisy koa ianao. Asa tsara momba ny Fedora Gnome no navoaka tato koa tato ho ato, ary tena maniry ny hanandrana ianareo roa. Heveriko fa raha hametraka izay fizarana an'ity karazana ity dia tsy maintsy manana solosaina vaovao ianao amin'ny resaka fitaovana.
Torolàlana tena currada fa asa inona no manana distro vonona amin'ny tianao hampiasaina, marina?
Raha mora ny mametraka ny mpamily nvidia amin'ny distro hafa …… .. raha fintinina, mbola tsy hitako ny fahasoavana amin'ity karazana distro ity. Mampanaintaina inona ny boriky hamela azy ireo ho vonona, fa tsy hanamora ny zavatra ho an'ny mpampiasa, izay adidin'ny rafitra fiasa rehetra.
Amin'ny fijerena fotsiny ny lisitry ny fonosana izay tsy maintsy apetraka hananana ireo mpamily nvidia ary efa ampiasaiko izany.
Mitovy hevitra aminao aho. Ankoatr'izay, ho sahy hilaza aho fa tsy misy amin'izy ireo mamela ny rafitra vonona. Efa nanandrana distro am-polony aho, ary tsy maintsy nanao zavatra toy izany tamin'ny REHETRA. Raha miditra amin'ny Staff of distro rehetra aho dia miala sasatra daholo isika, satria handany 24 ora amin'ny fanatsarana izany aho ary hamela programa tsara amin'ny xDDDD default. Izy io koa dia ho mandeha ho azy ny fametrahana mpamily sy ny zavatra maro. Fa amin'izao dia tsy mikasika izany. Amin'ny ho avy dia mikasa ny hanao ny rafitra fiasako manokana aho, izay ao anatin'ny tetik'asa ho avy, ka andao hojerentsika hoe hanao ahoana ny zava-drehetra amin'izay.
Ezequiel Simeoni dia hoy izy:
Mampiseho izany fa groso ianao amin'ny linux ary bebe kokoa ao Antergos, manolotra ny olako aho, rehefa avy nametraka sy namaha ny olan'ny GRUB mahazatra an'ity distro ity dia mameno ny rafitra fa ny efijery dia banga avokoa ary ny totozy ihany no voatondro.
Avy eo dia miditra amin'ny birao amin'ny alàlan'ny baiko aho miaraka amin'ny: Ctrl + Add + F2 ary afaka mivezivezy matetika aho, mandra-panavao ny rafitra ... fa tsy afaka mamaha ny olan'ny efijery fotsy aho
Manana processeur Atom aho, ary horonan-tsary INTEL, napetraka ny mpamily, (nametraka azy ireo koa aho) ary tsy misy ...
Misy torohevitra ve? Misaotra betsaka
Valiny tamin'i Ezequiel Simeoni
Tsy fantatro izay mety olanao. Fanontaniana vitsivitsy:
- Inona ny olan'ny GRUB lazainao?
- Misy LightDM napetraka sy voalamina tsara, sa tsy izany? Tsy mbola nikasika na inona na inona momba an'io ianao, sa tsy izany?
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia hoe manome anao karazana olana ny LightDM. Niezaka nanova azy io ho GDM aho, saingy sendra bug izay nandika ny teny miafina foana aho hoe S.
Azonao atao ny manandrana manao izao manaraka izao amin'ny terminal maody an-tsoratra miaraka amin'i Ctrl + Alt + F2:
$ sudo systemctl atsaharo ny lightdm.service
$ sudo pacman -S lightdm gnome-shell-extension-lockscreen-lightdm lightdm-webkit-theme-antergos lightdm-webkit2-weler
$ sudo systemctl mamela ny lightdm.service
$ sudo avereno
Mikasika ireo mpamily Intel, tsy mila apetrakao izy ireo, satria tonga hatrany amin'ny toerana misy azy ireo. Ary koa, raha milaza ianao fa afaka miditra amin'ny birao avy amin'ny terminal, heveriko fa tsy ny mpamily karatra sary no olana.
Misaotra betsaka anao mamaly, TSY afaka miditra amin'ny birao aho amin'ny terminal, ny tiako holazaina dia hoe afaka mampiasa azy aho, mampiditra folder, fa ny lahatsoratra rehetra, tsy misy sary,
Ny olan'ny GRUB izay hitako tamina forum maro izay nanjo azy ireo, izao dia tsy tadidiko tsara izay voalaza ao, fa olana iray ny tsy ahafahan'ny grub manomboka Antergos, namaha azy aho tamin'ny fametahana grub tamin'ny fomba maro mandra-pahombiazany, Heveriko fa tsy nikasika zavatra LightDM aho, tsy fantatro akory izany.
Misaotra, andramako izany ary ampahafantaro anao ny fandehany, tsy te-hametraka indray aho Antergos satria nandany adiny 3 na 4 aho nisintona avy amin'ny internet, ary ny sosona dia manana olana GRUB indray aho.
Mijery aho amin'ny fampiasana OpenSUSE Tumbleweed, safidy mety ve izany?
Mampiasa OpenSUSE Tumbleweed aho ary afaka milaza aminao aho fa safidy tena tsara izy io ary milamina tsara. Ny zavatra tokana izay ao amin'ny AUR dia afaka mahita rindrambaiko kely kokoa noho ny ao amin'ny OpenSUSE.
Izaho dia manana olana mitovy amin'ilay kinova farany indrindra, rehefa avy nametraka ireo mpamily, taorian'ny nilazany hoe Ops dia nisy olana iray nikatona, mikatona izy io, ary manana efijery mainty aho, narahiko ny dingana nomen'izy ireo ary dia mijanona ho toy izany ihany izy, tsy haiko intsony inona no hatao, tsy afaka miditra amin'ny gnome aho, tsy miseho ny efijery fidirana, ny mainty rehetra, ny bokotra havanana ambony sy ny totozy azo jerena, inona koa no azoko atao ????
Na dia eo am-pametrahana Antergos aza aho dia tsy mitaky zavatra betsaka dia toa feno tokoa ho an'ireo izay mila izany "zavatra hafa" izany.
Mitahiry ny ambadika aho.
Amin'ny fomba fijery manokana, mieritreritra ve ianao fa vonona ny hampiasa antergos amin'ny solosaina hiasa (toeram-piasana), na famoahana horonan-taratasy hafa?
Hevitra manokana mahaliana ahy indrindra dia ny:
-Miorina izy ary mijanona ho marin-toerana sy haingana toy ny rehefa apetraka.
- Tsy mora tapaka izany.
Ho an'ny sainao misaotra.
Tsy misy isalasalana, eny ny valiny. Nampiasako azy io nandritra ny andro vitsivitsy ary tsy manome olana amiko izany. Spectacular;).
Misaotra tamin'ny valinteninao.
Misaotra tamin'ny valiny.
Salama, ho ahy ny valiny dia tsia, ary tsy ho an'ny antergor ihany fa ho an'ny fihodinana rehetra. Ho an'ireo fanontanianao dia heveriko fa ny zavatra tsara indrindra ho anao dia ny misafidy lts (linux mint ohatra) na distro misy famoahana isam-bolana x toy ny openuse, ny fampiasana ireo distros ireo dia milamina kokoa tsy misy fisalasalana fa tsy mampiasa mihodina izay tsy mbola hitanao fantaro izay olana azonao andrasana aorian'ny fanavaozana.
Na raha mitady manjaro mihodina tsara kokoa ianao dia voafehy kokoa ny fanavaozana azy.
Misaotra ny valiny, miombon-kevitra aminao aho jony127, niara-niasa tamin'ny manjaro nandritra ny fotoana fohy aho na milamina ny zava-drehetra mandra-pandrika ny rafitra iray ny fanavaozana, ka heveriko fa tazomiko ny linuxmint kde. 🙂
Tena tsara ny zava-drehetra fa ... manana sary amd aho, amin'ny manjaro dia mametraka ilay catalyst mora aho fa amin'ireo teo aloha?
Antergos dia miorina amin'ny Arch. Toy ny Manjaro koa dia tokony hitovy ny fomba :).
Ny zava-mitranga dia ny manjaro dia manana fitaovana antsoina hoe Manjaro Configuration Manager, izay isehoan'ny mpamily arakaraka ny sary anananao, amin'ny fisafidianana ilay mifanentana omena anao hametrahana azy ary hikarakara ny zava-drehetra izy, azo apetraka sy esorina koa ilay voan-kitapo mitovy amin'izany, miaraka amina tsindry tokana hametrahana azy, tokony hanondro an'io fitaovana heveriko io ny geek. Ary teo aloha dia tsy manana an'io mpitantana io izy ireo.
Aleoko ny rohy Arch wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/AMD_Catalyst
rcasari dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, tsara ho an'ny hafatrao momba ny antergos, nieritreritra aho ary nilaza fa te hanandrana an'ity distro ity, tsara, nidina ny iso aho ary ny tena marina dia nanana olana maro aho, tena tsara ilay cnchi saingy nanjo ahy izy io mikatona im-betsaka fotsiny, olana iray hafa nananako Natao tamin'ny partition boot ary ny farany ary manelingelina indrindra fa miadana be ny repositories ary amin'ny fametrahana dia milatsaka toy ny fonosana 853 ary maharitra adiny 2 eo ny misintona azy ireo vao afaka manao azy. ratsy kokoa rehefa vita ny fisintomana dia nandefa lesoka aho ary nofoanana ny fametrahana.
Mamaly an'i rcasari
Tsy nisy nanjo ahy ny nitaizanao o_o. Hitako fa manana olana koa ireo mpampiasa hafa. Heveriko fa noho ny fitaovana, inona no hataontsika: S ...
Salama lajto, tsy nametraka antergos aho fa amin'ny distro fanabeazana fototra misy ahy izay mbola tsy mandresy lahatra ahy loatra noho ny anao ary nahavita nanao azy 100% Wow WOD ka faly aho = D
Tena faly aho! Izay lazainao amiko. Milalao isan'andro ao amin'ny GNU / Linux aho, tsy misy fizarazaran'i Windows na zavatra hafa x).
Tsara eto aho dia mandalo ireo dingana hametrahana bumblebee ho an'ny Artegos / arch / manjaro satria ny pikantsary misy ny fomba voalaza eto xd
ary alao antoka fa ity Bridge = primus, Driver = nvidia ity
ary mampihetsika ny serivisy amin'ny systemd
sudo systemctl mamela bumbbeed
raha mampiasa fametrahana kernel-bfs
ampidiro amin'ny bumblebee ny mpampiasa
gpasswd - mpampiasa bumblebee ary manavao
mampihetsika nvidia miaraka amina programa
ary dia izay :). Miarahaba ary manantena hanampy olona 😉
Misy fomba iray hanovana ny endritsoratra manodidina ny desktop ihany koa?
misaotra tamin'ny lahatsoratra feno toy izany.
Samu dia hoy izy:
Azonao vonoina ve ny mpifantina sehatr'asa? Zatra manao an'io irery aho.
Mamaly an'i Samu
Salama, tena mahaliana ny Antergos, ary na dia marina aza fa toa tsotra be ny fametrahana azy, dia nanahirana aho tamin'ny voalohany, satria mangataka ahy hanana fifandraisana Internet hanohizana izy, na izany aza, tsy hitako ny mampifandray azy amin'ny alàlan'ny Wi -Fi, satria tsy tonga ny safidin'ny fifandraisana Wi-Fi. Efa antitra ny solosaina finday, Dell Latitude D600 izay misy Windows XP taloha mihazakazaka miaraka amin'ny fahamendrehana barbariana, saingy tiako ny manampy linux mahafinaritra sy maivana.
Miandry izay sosokevitra rehetra aho, misaotra.
Nicolas Ernesto dia hoy izy:
Salama! Antergos dia azo apetraka amin'ny Internet ihany. Raha te hanandrana distro mitovy amin'izany ianao mamela anao hametraka tsy misy Internet dia andramo i Manjaro.
Valiny tamin'i Nicolás Ernesto
Josetxo dia hoy izy:
Hey, manana solosaina misy sary AMD APU aho ary tiako ny UBUNTU SO.
Fantatro, tsy dia marani-tsaina izany amiko, toa ny c ...
Ny fanontaniana mipetraka dia…
Hihatsara ve ny fahombiazako amin'ny kinova taloha na afaka manome distro hafa ve ianao?
Valiny tamin'i Josetxo
Inona ny DuckDuckGo sy ny fomba fanaingoana azy?
Sary WhatsApp vaovao - Fanavaozana ny fampidinana